Sirni awwaalchaa Eda’oo Booruu (1952-2017) Maqiitti raawwatame – Oromedia
Home » Uncategorized » Sirni awwaalchaa Eda’oo Booruu (1952-2017) Maqiitti raawwatame
(Finfinnee, Hagayya 1, 2017) Sirni awwaalchaa Hayyuu Seenaa Oromoo, Ob Eda’oo Booruu Odaa, sirna hoo’aa fi kabajaa guddaan magaalaa Maqiitti Adoolessa 30 bara 2017 raawwatame.
Sirna Gaggeessaa Eda’oo Booruu (1952-2017)
Ob Eda’oon waggaa 65tti addunyaa kana irraa darban.
Yeroo reeffii Ob Eda’oo Booruu magaalaa Finfinnee gahe irraa kaasee haga Maqiitti simannaa fi gaggeessaan guddaan umamta dhibbootaan lakkaayamniin godhameefii jira.
Artistooti Oromoo, maanguddooti, hayyootii fi hawwan hedduun sirna kana irartti argamuun hayyuu kanaaf kabaja qaban haala miidhagaa ta’en mul’isaniiru.
Sirna awwaalchaa akka aadaa Oromootti fardaan dabaalame kana irartti Abbaan Gadaa Tuulamaa, Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo, argamuun jabinaa fi hayyummaa Ob Eda’oo Booruu dhaadhessanii jiru.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo sirnna gaggeessaa Eda’oo Boruu irratti
Ob Eda’oon waggoota dheeraaf Ameerikaa magaalaa Tennessee keessa jiraatan; garuu torbee lama dura sababa dhibee Kaansariitiin addunyaa kanarraa boqatan.
Hayyuun seenaa kun Seenaa Oromoo keessummaa kan Finfinnee irratti hubannoo gahaa qaban. Hubannoo fi beekumsa kanas yeroo addaddaatti ibsaa turan.
Beekumsa isaanii kanas soorama booda barreeffamaan dhiheessuuf yaada isaa kan qaban akka ture dubbii isaan kana dura dubbatan irraa hubatameera.
Eda’oo Booruu kan dhalatan Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti yoo ta’u, barnoota kutaa 1 hanga 4 Magaalaa Maqiitti baratanii kutaa 5ffaa booda gara Finfinnee dhufuun barachuunsaanii ibsameera.
Barnoota hanga digrii jalqabaa Finfinneetti baratanii , digrii lammaaffaa 6 ga’u biyya alaatti hojjachuu danda’aniiru.
Hayyuun seenaa kun abbaa intala durbaa tokkoo akka turan beekameera.
Ob Eda’oon hayyoota seenaa durii akak gaariitti yaadachuun beekamn keessatti ramadamu. Namooti hedduunis “kuusaa beekumsa seenaa Oromoo” jedhanii waamaa turan.
Oromedian maatii fi firroottan isanii maraaf jajajbina hawwa!
Previous: Falaasama Arawaatoo fi facaasaa midhaanii Godina Horroo Guduruu Wallaggaa
Next: Ayyaana Gindii Hiikkaa Godina Horroo Guduruu